Joshụa 18 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
A nọ na Shaịlo keere ndị Izrel ala fọrọnụ (1-10)
Ala ebo Benjamin ketara (11-28)
18 Ndị Izrel niile wee gbakọta na Shaịlo.+ Ha makwara ụlọikwuu nzute n’ebe ahụ,+ n’ihi na ha ewegharala ala ahụ.+ 2 Ma a ka nwere ebo asaa fọrọ n’Izrel, ndị a na-ekenyebeghị ala nke ha. 3 Joshụa wee sị ndị Izrel: “Olee mgbe unu ga-akwụsị oge a unu na-egbu? Oleekwa mgbe unu ga-aga weghara ala Jehova bụ́ Chineke nna nna unu hà nyere unu?+ 4 Sinụ n’ebo nke ọ bụla họpụta ụmụ nwoke atọ. M ga-ezipụ ha ka ha gagharịa n’ala ahụ ma see ala ebo nke ọ bụla ga-eketa n’akwụkwọ. Ha sechaa ya, ha abịa hụ m. 5 Ha ga-ekere ya onwe ha ụzọ asaa.+ Juda ga-ebi n’ala ya n’ebe ndịda,+ ụmụ Josef ga-ebikwa n’ala ha n’ebe ugwu.+ 6 Seenụ otú a ga-esi kee ala ahụ ụzọ asaa n’akwụkwọ. Wetakwaranụ m akwụkwọ ahụ ebe a. M ga-efekwara unu nza+ ebe a n’ihu Jehova bụ́ Chineke anyị. 7 Ma, ndị Livaị agaghị eketa ala ọ bụla,+ n’ihi na ha ga na-ejere Jehova ozi n’ụlọ nsọ.* Ọ bụ ya ka ha ketara.+ Gad, Ruben, na ọkara ebo Manase+ ketara ala dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Jọdan. Ọ bụ Mosis ohu Jehova kenyere ha ya.” 8 Mgbe ụmụ nwoke ndị ahụ jikeere ka ha gaa see ala ahụ n’akwụkwọ, Joshụa sịrị ha: “Gagharịanụ n’ala ahụ, seekwanụ ya n’akwụkwọ. Bịakwanụ hụ m ma unu sechaa ya. M ga-anọ n’ihu Jehova na Shaịlo ebe a feere unu nza.”+ 9 Ụmụ nwoke ndị ahụ gawara, gazuo ala ahụ niile ma see ya n’akwụkwọ. Ha kekwara ya ụzọ asaa n’obodo n’obodo. Mgbe ha mechara, ha bịakwutere Joshụa n’ebe ha mara ụlọikwuu ha na Shaịlo. 10 Joshụa wee feere ha nza na Shaịlo n’ihu Jehova.+ Ọ nọkwa ebe ahụ keere ndị Izrel ala ahụ, kenye ebo nke ọ bụla nke ha.+ 11 Mgbe e fere nza nke mbụ, ọ dabaara ebo Benjamin, n’ezinụlọ n’ezinụlọ. E kenyekwara ha ala dị n’agbata ala ụmụ Juda+ na ala ụmụ Josef.+ 12 N’ebe ugwu, ala ha malitere n’akụkụ Osimiri Jọdan, gara ruo ná mkpọda Jeriko+ n’ebe ugwu, ruokwa n’ugwu dị n’ebe ọdịda anyanwụ. O rukwara n’ala ịkpa Bet-evin.+ 13 O sikwa ebe ahụ ruo Lọz, ná mkpọda nke dị n’ebe ndịda Lọz, ya bụ, Betel.+ O rukwara Atarọt-ada+ n’elu ugwu nke dị n’ebe ndịda nke Bet-horọn Ndịda.+ 14 Ala ha sikwa n’ugwu dị n’ebe ọdịda anyanwụ, n’ebe e si aga Bet-horọn, gara ruo n’ebe ndịda. Ọ kwụsịrị na Kiriat-bel, ya bụ, Kiriat-jierim.+ Ọ bụ otu n’ime obodo Juda. Ebe a bụ ebe ọdịda anyanwụ. 15 Ala ha nke dị n’ebe ndịda bidoro na nsọtụ Kiriat-jierim, garakwa ruo n’ebe ọdịda anyanwụ, ruokwa n’isi mmiri Neftoa.+ 16 Ala ha rukwara na nsọtụ ugwu dị n’agbata Ndagwurugwu Hinọm+ na Ndagwurugwu Refeyim+ n’ebe ugwu. O sikwa na Ndagwurugwu Hinọm gara ruo ná mkpọda obodo ndị Jebus+ nke dị n’ebe ndịda, ruokwa n’En-rogel.+ 17 O sikwa n’ebe ugwu gara ruo En-shimesh, ruokwa Gelaịlọt, nke dị n’ụzọ e si aga Adọmịm.+ O rukwara na nkume+ Bohan+ nwa Ruben. 18 Ọ gakwaara ruo ná mkpọda nke dị n’ebe ugwu e si aga Araba. O rukwara Araba. 19 Ala ha gakwaara ruo ná mkpọda dị n’ebe ugwu Bet-họgla,+ ma kwụsị n’ọnụ mmiri dị n’ebe ugwu Oké Osimiri Nnu,+ na nsọtụ ebe ndịda Osimiri Jọdan. Ebe a bụ ókè ha n’ebe ndịda. 20 Ókè ha n’ebe ọwụwa anyanwụ bụ n’osimiri Jọdan. Ebe ndị a niile ka ụmụ Benjamin ketara ala, n’ezinụlọ n’ezinụlọ. 21 Obodo ndị dị n’ala ebo Benjamin ketara, n’ezinụlọ n’ezinụlọ, bụ: Jeriko, Bet-họgla, Imek-kiziz, 22 Bet-araba,+ Zemarem, Betel,+ 23 Avim, Pera, Ọfra, 24 Kifa-amọnaị, Ọfnaị, na Giba.+ Ha dị obodo iri na abụọ, ha na ógbè ha niile. 25 Obodo ndị ọzọ bụ Gibiọn,+ Rema, Bierọt, 26 Mizpe, Kefaịra, Moza, 27 Rikem, Iyepiel, Tarala, 28 Zila,+ Ha-ilef, Jebusi, ya bụ, Jeruselem.+ Obodo ndị ọzọ bụ Gibia+ na Kiriat. Ha dị obodo iri na anọ, ha na ógbè ha niile. Ala a ka ụmụ Benjamin ketara, n’ezinụlọ n’ezinụlọ.
^ Ma ọ bụ “ha ga na-achụrụ Jehova àjà.”